खुशीको खबर ! अब गोसाइँकुण्डमा केबलकार बन्ने भयो….::Leading Nepal News
खुशीको खबर ! अब गोसाइँकुण्डमा केबलकार बन्ने भयो….
बैशाख १५, रसुवा । रसुवा–धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र गोसाइँकुण्डसम्म केबलकार निर्माण गरिने भएको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका २ कुटुङसाङदेखि गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका ५ स्थित कुण्डसम्म केबलकार निर्माण गरिने भएको छ ।लाङटाङ केबलकार प्रालिले निर्माण गर्ने उक्त प्रस्ताव अघि बढाएको हो । केबलकार सञ्चालन हुने क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रालिका अध्यक्ष भीम ढकालले बताए ।
कम्पनीका अनुसार पाँच वर्षभित्रमा केबलकार निर्माण गरिसक्ने र त्यसको लागत २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका २ कुटुङसाङ २४७० मिटरमा उचाइमा रहेको छ भने गोसाइँकुण्ड ४३८० मिटर उचाइमा छ । केबलकारको लागि कुटुङसाङदेखि गोसाइँकुण्डसम्म दुरी ९ किलोमिटर हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
गोसाइँकुण्डसम्म केबलकार सञ्चालनका लागि अन्य स्थानबाट पनि प्रक्रिया बढेको भए पनि कुटुङसाङदेखि गोसाइकुण्डसम्म निर्माण हुने केबलकार आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकका लागि सहज हुने कम्पनीको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।